प्रिय पुस्तक: ‘नोयो’ र ‘रने’ले चोरेको मन  OnlineKhabar
प्रिय पुस्तक: ‘नोयो’ र ‘रने’ले चोरेको मन
मेरो पठन यात्रा त्यस्तो किताबबाट सुरु भयो, जसलाई मूलधारको साहित्य मानिँदैन ।‘पल्प‘ वा ‘प्लेटफर्म‘ साहित्यलाई मूलधारको नमानिए पनि त्यसले आम पाठकलाई छोएको छ । गम्भीर साहित्यको पाठक हुनुअघि धेरैले त्यस्तै सामान्य उपन्यास/कथा पढे र असाध्यै मन पराए ।
तर, यो फरक कुरा हो, मन पर्ने किताब एकथरि भए पनि अधिकांशले मन पर्ने किताबको नाम लिँदा गहन–गहन किताबको मात्र नाम लिन्छन् । दोस्रो दर्जाको साहित्य ठानिने त्यस्ता सामान्य किताबको नाम उच्चारण गर्न संकोच मान्ने गरिन्छ । गफ दिनलाई त जे दिए पनि हुन्छ !
मेरो दिमागमा भने सुरुवाती समयमा पढेका तिनै सामान्य उपन्यासका कहानीहरु सचित्र आउँछन् । कारण हो, मलाई सधैं सरल लेखन मन पर्‍यो । ती रमाइला थिए । कतिपय किताब त समाजका गम्भीर विषय केलाएकाले मार्मिक पनि हुन्थे ।
मलाई किताबमा यही जनराको मन पर्छ भन्ने छैन । कस्तो किताब मन पर्छ भन्नेमा वातावरण, उमेर, रुचि र पेशाले पनि फरक पर्छ । स्वाभाविकै हो, म चिकित्सा पेशामा भएकोले कुनै कथामा डाक्टरको कुरा जोडिएको रहेछ भने पढूँ–पढूँ हुन्छ ।
किताब पढ्ने कुरालाई फिल्मसँग जोडेर हेर्न मन लाग्छ । हामी फिल्म दुइटा कुराको लागि हेर्न जान्छौं । पहिलो कुरा त हेरेपछि मस्तसँग मनोरञ्जन भएर पैसा असुल होस् । दोस्रो, मनोरञ्जनसँगै त्यसले कुनै विषयवस्तु बोकेको छ र मेसेज दिन्छ भने त्यो बोनस प्वाइन्ट हो ।
किताब पढ्दा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । किताब रमाइलो हुनुपर्‍यो, त्योसँगै किताबले केही विचार पस्कियोस्, केही ज्ञान देओस् । त्यो विचारसँग म सहमत हुन पनि सक्छु, नहुन पनि सक्छु ।
मलाई सरल भाषामा लेखिएको कुरा पढ्न मन पर्छ । कतिपय किताब पढ्नै सकिन्न । जबर्जस्ती दर्शन र अनेक थोकले बोझिलो बनाइएका भारी भरकम किताबहरु देख्दा किन यसो गरिएको होला, सजिलो तरिकाले लेखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
फिक्सन पढ्दा मात्र रमाइलो हुन्छ भन्ने छैन । नन–फिक्सन पनि एकदम स्वादिलो हुन सक्छ । जस्तै, बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त फिक्सन होइन, तर पढ्न मजा आउँछ । त्यसबाट नन–फिक्सन पनि रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । पछिल्लो समय निस्किएका केही आत्मकथा पनि रमाइला छन् ।
यस्तै, नन–फिक्सन नै भए पनि मोहन मैनालीको ‘मान्ठा डराएको जुग‘, झलक सुवेदीको ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा‘, जनकराज सापकोटाको ‘कहर‘ जस्ता किताबले छुन्छन् । विषय ओजिलो र प्रस्तुति राम्रो भए भने फिक्सन र नन–फिक्सन दुवैले उत्तिकै प्रभावित पार्न सक्छन् । किताब राम्रो छ भन्ने लाग्ने नै के हो भने, त्यो किताब आरामले पढ्न सकियोस् ।
कतिपयले पढ्न नसकेका किताब पनि राम्रो छ भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो अप्ठेरो किताब म चाहिँ पढ्न सक्दिनँ । हिन्दीमा ‘और भी दिवारे है सर फोडने के लिए‘ भने जस्तै अरु नै समस्या रहिरहँदा मलाई त्यस्तो किताब पढेर तनाव बोक्नु पनि छैन ।
बाध्यताले उपन्यासको लत लाग्यो
झापाको भद्रपुरमा चार कक्षामा पढ्दादेखि नै म किताबको मोहमा परेँ । यो ०३३/३४ सालतिरको कुरा हो । त्यसबेला मेरो माहिलो दाइ भने सातमा पढ्नुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँ जासुसी उपन्यास खुबै पढ्नुहुन्थ्यो । साथीभाइसँग साटफेर गर्दै घरमा उपन्यास ल्याइरहनुहुन्थ्यो ।
दाइ र म एउटै खाटमा सुत्थ्यौं । यस्तैमा एक समय दाइले पढेको किताबले मलाई पनि लोभ्यायो । राति ओछ्यानमा ढल्किएर उहाँले पढिरहँदा छेउमा सुतेको मेरो पनि आँखा पुग्थ्यो ।
कोठाको बत्ती ननिभ्दासम्म निदाउने अवस्था नहुने भएकोले दाइ नसुतुन्जेल ब्युँझिराख्नु मेरो बाध्यता थियो । त्यस क्रममा दाइले पढ्दै गरेको किताब च्याउने मेरो नित्य कर्म नै बनिसकेको थियो ।
त्यसरी हेर्दाहेर्दै केही दिनमा त मलाई पनि रमाइलो लाग्न थाल्यो । छेउबाट च्याएरै अलिअलि पढ्दा कथामा चाख लाग्न थालिसकेको थियो । तर, म भर्खर आधा पेजमा पुग्दा दाइले पढिसकेर अर्को पेज पल्टाइसक्नुहुन्थ्यो ।
दाइलाई बिन्ती बिसाउँथे, ‘दाइ एकछिन पर्खिनुस् न ! म पनि पढ्दै छु ।‘
कथामा बगेको दाइको मन कहाँ रोकिन मान्थ्यो र ! उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘कहाँ कुरिराख्नु अब तँलाई !’
उहाँले पढेको किताब ‘पुच्छ्रे तारा‘ भन्ने नेपाली जासुसी उपन्यास थियो ।
दाइले पढ्दा आधाउधी मात्र पढ्न पाएको थिएँ । दाइले किताब सिरानीमुनि राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ नभएको बेला पारेर त्यो किताब पूरा सिध्याएँ ।
मलाई रमाइलो लाग्यो, पढ्ने चिज त यस्तो पो हो भन्ने भयो । स्कूलको किताब गाह्रो मानीमानी पढे पनि केही नबुझेर हैरान भएको बेला त्यस्तो उपन्यासले मन तान्यो । त्यसपछि त नेपालीसँगै हिन्दीका जासुसी उपन्यास पढ्ने लत नै लाग्यो । कतिसम्म भने, म स्कूलमा पनि कोर्सको किताबभित्र उपन्यास राखेर पढ्ने गर्थेँ । लास्ट बेन्चमा बस्ने भएकोले सजिलो पनि हुन्थ्यो ।
त्यसपछि दाइले ल्याउने गरेका जासुसी उपन्यास मौका मिलेसम्म र भ्याएसम्म पढ्न थालेँ । कुनै किताब चाहिँ पढ्दापढ्दै बीचमै अपूरो रहन्थ्यो । किनकि दाइले चाँडै पढिसकेर साथीहरुसँग अर्कै किताबसँग साटिसक्नुहुन्थ्यो ।
त्यसबेला यस्तो उपन्यास पढ्ने जमात ठूलो थियो । मनोरञ्जनका अरु साधन नभएकोले धेरैले पढ्थे । कि त फिल्म हेर्न जाने, कि उपन्यास पढ्ने ।
बिस्तारै दाइले घरमा कता–कताबाट थुप्रै उपन्यास जम्मा पारिसक्नुभएको थियो । दराजमा लाइब्रेरी जस्तै व्यवस्थित रुपमा नम्बरिङ गरेरै राख्नुभएको थियो । त्यहाँ सय–डेढ सय वटा उपन्यास थिए होलान् । दराजमा चाबी लगाउनुहुन्थ्यो । तर, म खोजखाज गरेर भए पनि चाबी पत्ता लगाएर उपन्यासको संसारमा पस्थेँ ।
किताब झिकेर प्राय: बुइँगलमा गएर पढ्थेँ । पढ्ने बानीले स्पिड पनि बढेको थियो । त्यस्ता जासुसी उपन्यासहरु दुई घन्टामै पढिसक्थेँ । फेरि चाँडै पढिसकेर दराजभित्र दुरुस्तै राखिदिऊँ भन्ने हतारोले पनि छोप्थ्यो ।
त्यसरी पढ्दा कुनै बेला भने दाइले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि दाइबाट गाली र पिटाइ खाइहाल्थेँ । आमाले पनि उपन्यास पढेर बिग्रिन्छस् भनेर मलाई कराउनुहुन्थ्यो । किनकि म स्कूलमा राम्रै विद्यार्थी मानिन्थेँ । दाइले चाहिँ जति गरे पनि राम्रो पढ्दैन भनेर छुट जस्तै पाउनुभएको थियो ।
एलएलसी अगाडि उपन्यासकै तयारी !
पढेर माथिल्लो कक्षामा उक्लिँदै जाँदा उपन्यास पढ्ने बानीले धुरन्धर पढन्ते भइयो । यस्तैमा कक्षा १० को सेन्टअप परीक्षा मंसिरमा दिएपछि एसएलसी हुने फागुनसँग म बेकामे भएँ । त्यो समयमा पनि उपन्यास खुबै पढियो ।
त्यतिन्जेल नेपाली उपन्यास लगभग जम्मै पढिसकिएको थियो । प्रकाश कोविददेखि युधीर थापाका उपन्यास एकसरो छिचोलिएको थियो । अब हिन्दी उपन्यास पढ्नुपर्छ भनेर सुर कसियो ।
घरदेखि तीन किलोमिटरको दूरीमा भद्रपुर पुस्तकालय थियो । पुस्तकायमा १० रुपैयाँ तिरे एक महिनाको सदस्यता पाइन्थ्यो । एउटा किताब घर लगेर पढ्न पाइन्थ्यो । लाइब्रेरियन एक जना चिनजानकै गाउँले मामा भएकोले म तीन वटा उपन्यास लिएर आउँथेँ ।
बिहानदेखि पढेर दिनभरिमा तीन वटै पढिभ्याउँथेँ । त्यति सक्नासाथै अरु किताब लिन पुस्तकालयतिर दौडिहाल्थेँ । त्यस क्रममा वेदप्रकाश शर्मामा जासुसी उपन्यासहरु बढी पढेँ ।
किताब पढ्नै पाटनबाट डिल्लीबजार धाइयो
ईञ्जिनियर बन्ने भनेर म आईएस्सी पढ्न काठमाडौं आएँ । पाटन क्याम्पसमा भर्ना भएको थिएँ । अब त पहिले स्कूलमा जस्तो लरतरो पढाइले हुनेवाला थिएन । पढ्नुपर्छ भन्ने भावना बढी भयो । कोर्सको किताबमै केन्द्रित भएँ ।
तर, कता–कता जासुसी उपन्यासको मोह छँदै थियो । म पाटनमै बस्थेँ । त्यहाँ मेरा गाउँतिरका साथी कोही थिएनन् । सबै काठमाडौं र छेउछाउकै मान्छे बस्थे । एक्लै हुन्थेँ ।
त्यस क्रममै वेदप्रकाशको ‘देवकान्त सन्तति‘ भन्ने उपन्यास आयो । पहिले उसका विजय र विकास सिरिजका सबै जासुसी किताब पढिएको थियो । यो त कसरी छोड्नु भन्ने लाग्यो ।
डिल्लीबजार पिपलबोटमा सेकेन्ड ह्यान्ड किताब पसल थियो । किताब सस्तोमा भाडामा लगेर फिर्ता गर्ने सुविधा थियो । म पाटनबाट त्यहाँसम्म गएर किताब ल्याउँथेँ ।
भद्रपुरमा हुँदा त मैले प्रकाश कोविद र युधीर थापाको उपन्यास पढेँ भन्नुमा कुनै लाजको कुरा थिएन । अरुले देख्दा पनि यो केटो पढ्छ भन्ने हेराइ थियो । तर,काठमाडौं आएर क्याम्पस पढ्न थालेपछि अवस्था फेरियो । क्याम्पसका साथीहरुले रोमान्टिक अंग्रेजी उपन्यास साटफेर गर्दै पढेको देखिन्थ्यो । आफूलाई भने अंग्रेजी किताब पढ्न भनेपछि हिम्मतै हुन्थेन । कहिल्यै पढिनँ पनि ।
त्यसरी अंग्रेजी किताब पढ्नेहरुको अगाडि आफूले वेदप्रकाशको कुरा गर्दा म त हदै पाखे हुन्थेँ । त्यसैले हिन्दी जासुसी उपन्यास पढ्छु भनेर देखाउन कहिल्यै सकिनँ ।
क्याम्पसमा स्कूलमा अंग्रेजी माध्यममा पढेकाहरुदेखि धनी–गरिबसम्म सबै हुन्थे । म जस्तै हिन्दी उपन्यास पनि एक–दुई जना विद्यार्थी त थिए । तर, जासुसी उपन्यास पढ्छु भनेर सगर्व बताउन कहिल्यै सकिएन । खुसुक्क झोलामा बोकेर हिँड्थेँ । पढिसकेर किताब पसलमा फिर्ता गर्थेँ र अरु किताब झोलामा लुकाएर ल्याउँथेँ ।
पल्प फिक्सन भर्सेज साहित्य
मलाई कुनै दुई वटा किताब दिएर कुन ‘पल्प फिक्सन‘ हो, कुन चाहिँ साहित्य हो भनेर सोध्यो भने म पनि कति त छुट्याउन सक्छु । यो समस्या सामान्यतया कथा र उपन्यास विधामा हुन्छ ।
कुन चाहिँ कामचलाउ कथा हो, कुन चाहिँ विशुद्ध साहित्यिक कथा हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ होला । बीचको ‘ग्रे एरिया‘ मा चाहिँ धेरै वटा किताब पर्छन् जस्तो लाग्छ । त्यही किताब कसैलाई हावा लाग्न सक्छ, कसैलाई भने यसलाई पनि साहित्यको दाँजोमा राखौं भन्ने लाग्न सक्छ ।
हामीकहाँ विचित्र खालको मानसिकता छ । साहित्यकार भनेर चिनिएको मान्छेले जे लेखे पनि त्यसले साहित्यकै दर्जा पाउँछ ।
मानौं प्रकाश कोविदकै उपन्यासलाई उसले सारेर आफ्नो नाममा निकाल्यो भने पनि त्यो विशिष्ट साहित्य कहलिन्छ । लेखकको नामले नै ब्रान्डिङ गरिदिन्छ । अर्कातिर,प्रकाश कोविदले जति नै राम्रो साहित्य लेखे पनि जहिल्यै पनि त्यो पल्प साहित्य नै हुन्छ ।
हल्काफुल्का र खँदिलो साहित्य प्रष्टसँग छुट्टिए पनि लेखकको नामले ब्रान्डिङ गर्दा अन्डर रेटेड भएका किताब पनि छन् । कोविदको ‘नोयो‘ उपन्यास त्यस्तै हो । मैले यो उपन्यास ७/८ कक्षामा हुँदा पढेको हुँ ।
‘नोयो‘ र ‘रने‘को प्रभाव
‘नोयो‘ मा चीनले तिब्बतमा सांस्कृतिक क्रान्ति गरेपछिको अवस्था चित्रण गरिएको छ । क्रान्तिपछि तिब्बतीहरु शरणार्थी भएर भाग्दा चिनियाँ लालसेनाले गरेको थिचोमिचो देखाइएको छ । नोयो चाहिँ उपन्यासकी नायिका हुन्छिन् । उनी अनेक प्रताडना झेल्दै सायद एक्लै शरणार्थी भएर कतै पुग्छिन् ।
एक हिसाबले हेर्दा इन्द्रबहादुर राईको कथा ‘जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी‘ र‘नोयो‘ लाई तुलना गरेर हेर्दा उपन्यासको विषयवस्तु केही पनि नराम्रो छैन । तर, त्यो लेखेको कसले भन्दा कोविदले लेखे । पक्कै पनि कोविदको नेपाली भाषा त्यति परिष्कृत छैन होला । तर, त्यही नोयोको कुरा इन्द्रबहादुरले अलिकता भाषागत परिष्कार गरेर निकालेको भए त्यसले पक्कै पनि साहित्यको मान्यता पाउँथ्यो ।
एक जमानामा पढेको नोयोको कतिपय कथावस्तु म अहिलेसम्म सम्झिन्छु । रमाइलो थियो र नै सम्झिएँ । विषयवस्तु पनि गम्भीर थियो । तर, कतिपय किताबलाई लेखकको नामबाट लेबल लगाइँदा अन्यायमा परेका देखिन्छन् ।
साहित्य भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीले कक्षा नौ/दस मा केही कथा–कविता र क्याम्पसमा‘बसाइँ‘, ‘मुलुक बाहिर‘ जस्ता कृति पढका हुन्छन् । त्यसबाट नै उनीहरुले नेपाली साहित्यको पठनमा छिरेका हुन्छन् । या त रमाइला पल्प फिक्सनहरु पढेका हुन्छन् । तर, धेरैथरि किताब पढ्दा प्रिय किताब कुन हुन्छ भने, जुन पढ्दा रमाइलो लाग्छ र दिमागमा छाइरहन्छ ।
मन परेको नै यादमा बसिरहने हो । अर्थात् आँखा चिम्लिएर गम्दा अहिलेसम्म मैले जे सम्झिएँ, त्यो मलाई सबैभन्दा धेरै मन परेको भन्ने लाग्छ ।
दिमागमा ‘रने‘ भन्ने उपन्यास पढ्दाको याद पनि सँगालिएको छ । यो मैले नौ/दस कक्षामा पुग्दा पढेको हुँ । घरमा कताबाट आइपुगेको रहेछ । घरमा त्यो उपन्यास सबैले पढे होलान् । बल्लतल्ल अक्षर छिचोल्न सक्ने आमाले पनि त्यो पढ्नुभएको थियो ।
उपन्यासको कभरसहित अगाडिका चार–पाँच वटा पाना थिएनन् । पछाडि कति पृष्ठसम्म थियो भन्ने पनि मलाई थाहा भएन, पछाडिको भाग पनि च्यातिएको थियो ।पछाडिका पनि चार–पाँच पाना थिएनन् होला । लेखक तुलसीराम कुँवर रहेछन् भनेर पछि मलाई थाहा भयो । उपन्यासले निकै प्रभाव पार्‍यो मलाई ।
राणाकालदेखि प्रजातन्त्र आउँदासम्मको अवस्था चित्रण गरिएको छ त्यसमा । जम्मा एकचोटि पढे पनि त्यसको कथादेखि पात्रहरु रने, उसकी श्रीमती, ठूले, साने सबै याद छ मलाई । गाउँलेहरुको कृषि क्रान्ति, समाजमा रनेको संघर्ष र उदाहरणीय कार्य देखाइएको छ ।
संयोगान्त कथा भएर हो कि, लेखाइ राम्रो भएर हो कि, मूल पात्र रनेको चरित्र चित्त बुझेर हो कि, यो किताब यादगार बनेर बसेको छ । रमाइलो लागेर नै दिमागमा असरदार भएर बस्यो ।
२०७३ पुष २३ गते ११:०४ मा प्रकाशित (२०७३ पुष २५ गते ६:४९मा अद्यावधिक गरिएको)
#प्रिय पुस्तक#रामेश कोइराला#साहित्य
तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छः प्रधानमन्त्री देउवा
Uddhav bhatta लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २४ गते १:२६
This article reflects my experience.
Exactly my story of experience.
Yadav Pokharel लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २५ गते २१:५८
मैले पढेकाे रने उपन्यास पनि शायद तपार्इले पढेकाे त्यही पुस्तक नै हुनुपर्दछ जसको शुरू र अन्तिमका तीन चार पाना थिएनन् ।
samir लेख्नुहुन्छ | २०७३ माघ २९ गते ५:२७
Shree Prakash Kovid Ko Noyo upanyas chaihi halka fulka thyena. Bhasa lekhai Ko nap taul garne aafnai tarika hola tara sarba sadharan ko man mastiska ma saral tarika le prabhav parna saphal kriti lai nai lok priya bhannu parchha jasto lagchha. Lok le na bujne bhasa lai sahitye bhandai ma atma rati bhanda k hi pani hoina. jun kura sadharan pathak le afulai nai patra ko rup ma bujhera mahasus garchha tye nai sahitye ho jasto lagchha……………………
गहुँत १४८ रोगको औषधि भएकाे रुसी वैज्ञानिकको निष्कर्ष
पञ्जाबमा शृंखलावद्ध राजनीतिक हत्या